10 Mobile Kushambadzira Maitiro | Martech Zone
10 Mobile Kushambadzira Maitiro
Chitatu, June 27, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Paunotaura nezve kushambadzira nhare, ini ndinofunga vangangoita mushambadzi wese anowana mufananidzo wakasiyana werudzii rwezano rauri kutaura nezvaro. Nhasi tapedza chikamu chakazara chekudzidzisa nhare nemakambani angangoita makumi mashanu aripo. Sezvo Marlinspike Kubvunza akashanda nesu pane syllabus yekudzidzira, zvakave pachena kuti pane zvakawanda zvekushambadzira nhare kupfuura izvo munhu angafunge.
Heano gumi Mafoni Ekushambadzira Maitiro ekufunga nezve:
izwi - neimwe nzira, iyi inogara ichisiiwa :). Kunyangwe iri kungobatanidza nhamba yefoni pane yako saiti, kana kuvandudza yakazara nzira yekuita uye yekupindura zano kuburikidza nekufona maturusi maturusi senge Twilio, Kuita kuti kambani yako ive nyore kufona uye kuwana iyo ruzivo izvo zvaunotarisira zvinodiwa zvinowedzera kutendeuka kwemametric.
SMS - Ipfupi meseji masevhisi, kana kutumira mameseji, inogona kunge isiri tekinoroji yakanyanya pasirese, asi makambani anotumira matekinoroji tekinoroji anoramba achiona kukura nekutorwa. Haisi chinhu chechidiki chete… vazhinji vedu tiri kutumira mameseji zvakanyanya kupfuura zvataive nazvo munguva yakapfuura.
mobile ads - izvi hazvisi mabhenji kushambadzira ekare. Anhasi mafoni ekushambadzira mapuratifomu anosunda kushambadzira zvinoenderana nekukosha, nzvimbo uye nguva… zvichiita kuti zvive nyore kuti kushambadzira kwako kuonekwe nemunhu chaiye, panzvimbo chaiyo uye panguva yakakodzera.
QR Makodhi - haiwa ndinokusema sei… asi zvichiri kushanda. Mafoni eMicrosoft anoaverenga asingashandise Anwendung uye mabhizinesi mazhinji anoona yakanyanya kuregererwa mitengo - kunyanya kana uchimanikidza mumwe munhu kubva kudhinda kuenda online. Usavadzinga izvozvi.
Mobile Email - nharembozha email yakavhura mitengo wakadarika desktop yakavhurwa mitengo asi yako email ichiri tsamba yemagazini yawakatenga makore mashanu apfuura uye haugone kuverenga zviri nyore pane mbozhanhare. Wakamirira chii?
Mobile Webhu - kunyangwe kana yako saiti isina kugadzirira, unogona kunge uchiendesa chero chimwe chezvimwe zvishandiso zvekugadzira yako saiti nhare inoshamwaridzika. Hapana chimwe chazvo chakakwana, asi ivo vanoita basa racho zvirinani kupfuura chero chinhu. Tarisa yako nharembozha nhare kuti uone traffic yauri kurasikirwa nayo.
Mobile Commerce (mCommerce) - kana iko kutenga kuburikidza nemeseji meseji, nharembozha, kana iri kuuya kuitiswa padyo nemunda kutaurirana, vanhu vari kuita sarudzo yekutenga kubva kune yavo nhare mbozha. Vanogona kutenga kubva kune yako here?
Location Services - kana iwe uchiziva kuti mushanyi wako aripi, nei uchiita kuti akuudze? Nzvimbo yakavakirwa pawebhusaiti kana nharembozha zvinoita kuti zvive nyore kuti vatengi vako vakutsvage uye vasvike kwauri.
Mobile Applications - ini ndanga ndisina tarisiro yakanyanya nezve nharembozha pakutanga… ndaifunga kuti nharembozha yewebhu browser yaizoitsiva. Asi vanhu vanoda maapplication avo, uye ivo vanofarira kutsvagisa, kutsvaga, uye kutenga kubva kumabhureki avanoita bhizinesi nawo kuburikidza navo. Regedza chikumbiro chinomanikidza, masevhisi enzvimbo uye midhiya enhau pamusoro peyako nharembozha uye uchaona nhamba dzichikwira. Ive neshuwa yekumisikidza iyo SDK kune yako yaunoda analytics chikuva kuti uwane nzwisiso yaunoda!
mahwendefa -, handifarire kuti mapundu aro ane nharembozha… asi nekuda kwemaapplication uye mabhurawuza, ndinofungidzira iwo akatosiyana. Nekukura kunoshamisa kwePadad, Kindle, Nook uye iri kuuya Microsoft Surface, mapiritsi ave kuita iyo yechipiri chidzitiro vanhu vari kushandisa vachiona terevhizheni kana kuverenga muchimbuzi (eww). Kana iwe usina swipey piritsi app (seyedu mutengi Zmags) iyo inotora mukana weakasarudzika mushandisi chiitiko icho piritsi inogona kukupa, urikushayikwa.
Mazhinji makambani haafunge kuti zvigadzirwa zvavo kana masevhisi ari kumanikidza zvakakwana kuendesa nhare mbozha kutenderedza. Ini ndichapa muenzaniso wakanaka wekambani ine inoshamisa mobile app muindastiri iwe yaungafunge nezve… Behr. Behr yakaendesa a RuvaraSmart application yeserura izvo zvinokutendera kuti utarise kusanganisa kwemavara, kuenzanisa ruvara uchishandisa yako kamera foni, tsvaga chitoro chiri padyo kuti utenge kubva… uye nesarudzo huru yemakara akasanganiswa ekurudziro.
Tags: nzvimbo dzebasaMobile Anwendungmobile marketingnhare dzekushambadzira nziranhare yekushambadzira webhupfupi meseji systemSMSmamesejiizwiinzwi rekushandisa
Matanho ekugadzira iyo Facebook Peji